Ikhaya Elizimele Emphakathini OnamaGadi angama-55+ onezinsiza
Ikhaya libekwe endaweni ethule ye-Ironwood Village, umphakathi osebenzayo okhawulelwe iminyaka engaphezu kwengama-55 eCasa Grande, AZ. Lona umphakathi onamasango anezindawo ezivulekile eziluhlaza neziwugwadule. Ukuzola okuzolile okuseduze nokuthenga nokuzijabulisa kwenza umphakathi ulungele abantu abadala abakhuthele, abafuna ukujabulela ukuqashwa kweholide okunethezekile nokusebenzayo. Kufakwe emagcekeni i-clubhouse enesikhungo sokuzilolonga, isitudiyo sokuvivinya umzimba, kanye nedamu lokubhukuda elingaphandle.
I-ballroom iyikhaya lemicimbi eminingi yomphakathi, kuyilapho umtapo wolwazi namakhompyutha kubhekelela ukuphishekela ubuhlakani. Ngokuzijabulisa kwasendlini nemidlalo, inqwaba yamagumbi okuzilibazisa ahlinzeka ngendawo eningi yamakhadi, amabhiliyade, izitsha zobumba, ukuthunga, nabanye abathanda ubuciko nemisebenzi yezandla. Ibhola le-Bocce kanye nezinkundla ze-horseshoe, kanye nendawo ebabazekayo ye-croquet yotshani, indawo yokuhlinzeka ngokuzijabulisa kokuncintisana noma imisebenzi yangaphandle ehlelekile. Abathandi begalofu bangahlangana ezinkundleni zegalofu ezimbalwa eziseduze. Ngesikhathi sasebusika, kukhona umqondisi womsebenzi ozosiza kuzo zonke izindawo zokungcebeleka (zingehluka ngenxa ye-COVID-19).
Indawo eseduze yeCasa Grande inikezela ngezindawo zokudlela eziningi kanye nesikhungo esisha sokuthenga. Amakhasino kanye namanxiwa e-Casa Grande ngezinye zezinto eziheha kakhulu, zonke ezinokubukwa kwentaba okumangalisayo endleleni. Ngamathuba amakhulu okuthenga kanye nokuphila kwasebusuku okumatasa, i-Chandler ne-Phoenix kuqhele ngamamayela angama-30 kuye kwangama-40 kuphela. I-Phoenix futhi iqukethe isikhumulo sezindiza sase-Sky Harbour kanye namaqembu amaningana ezemidlalo aqeqeshiwe. Ezinye izindawo ezikhangayo ePhoenix - ezihamba phambili ohlwini nezivakashi - yiHeard Museum, Desert Botanical Garden, Piestewa Peak, Boyce Thompson Arboretum, Phoenix Zoo, South Mountain Park, kanye neMontezuma Castle. I-Ironwood Village e-Casa Grande iyisinqumo esihle sabantu abadala abakhuthele abangama-55+ e-Arizona.
I-Ironwood Village iwumphakathi wabantu abadala osebenzayo osenkabeni yeCasa Grande, e-Arizona. Kunezinsuku ezingaphezu kuka-300 zokukhanya kwelanga ngonyaka! Ukufinyelela okulula kuzo zombili i-Phoenix ne-Tucson, kwenza i-Casa Grande ibe indawo efiselekayo yokubamba ilanga, igalofu, ukuyothenga kanye nemisebenzi eyahlukene.
Inkampani yabaphathi bedolobha isiza ngayo yonke imibuzo futhi itholakala kalula.